« Manonoke fanahy »: teatra hafakely, mampihomehy, mahavariana… | NewsMada
« Manonoke fanahy »: teatra hafakely, mampihomehy, mahavariana…
Mihamaro ny tanora tia manao teatra, araka ny hita amin’ireo tropy manan-daza eto an-dRenivohitra. Mihamivoatra ihany koa ny teatra, ny endrika anehoana ny tantara, ka mifanaraka kokoa amin’ny zava-misy ankehitriny. Anisan’ny mitrandraka izany ry Landy Volafotsy, tsy zovina amin’ny maro intsony, araka ny nambaran’i Doly Odeamson, mpitarika ity kaompania ity.
Ahitana taratra izany, ohatra, ny piesy mitondra ny lohateny hoe « Manonoke fanahy », holalaovin’ny Landy Volafotsy miaraka amin’ny kaompania Lolita Monga, avy atsy La Réunion, rahampitso tolakandro etsy amin’ny IFM Analakely. Tantara japoney izy ity, saingy narindran’ny roa tonta hifanaraka amin’ny kolontsaina malagasy sy ny zava-misy ankehitriny.
«… Tsy toy ny taloha fa miezaka mitady zava-baovao hatrany ny Landy Volafotsy. Tsy misy intsony ny fizarana, hita mahazatra any anaty piesy teatraly. Ny zavatra tsy maintsy misy, ny haiteny mampihomehy sy ny hira izay samy misarika ny olona… », hoy hatrany i Doly Odeamson.
Ankoatra ireo, mampiavaka ny fanehoana ity tantara ity koa ny filalaovana azy toy ny any anaty onjampeo any. « Tanjona ny hisarika ny mpijery hihaino tsara ny tantara fa tsy hijery fotsiny ny fihetsika », hoy ny kaompania Lolita Monga. Heno ao anatin’ny « Manonoke fanahy » avokoa ny teny malagasy, kreola ary frantsay. Araka izany, miavaka sy tsy mbola fahita mihitsy ity karazana teatra haseho rahampitso ity.
Mahaliana ny votoatin’ny tantara, maneho ny zava-misy ankehitriny : ny ady eo amin’ny zavaboahary sy ny olombelona. Efa nentina tany Toamasina ny « Manonoke fanahy ». Anjaran’Antananarivo indray izao. Avy eo, ho any Ankazobe, Maevatanàna, Nosy-Be ary Antsiranana.
Tanjon’ny Lolita Monga sy ny Landy Volafotsy ny hampiaina zavakanto mahafinaritra toy itony amin’ny sokajin’olona rehetra. Mba hanamorana izany, tsy mitondra fitaovana lehibe sy sarotra entina izy ireo fa miainga amin’ny zavatra tsotra nefa azo ilalaovana tsara.